Akụkọ - Banyere Mbupu
Ọ nweghị ihe nwere ike ịgbanarị mmetụta nke Covid-19, gụnyere mbupu, ọkachasị maka mbubata & mbupu.
Dịka akụkọ kachasị ọhụrụ na Ọgọst 10, enwere otu ikpe achọtara na ọdụ ụgbọ mmiri Ningbo Zhoushan, onye na-arụ ọrụ ebe a. Mgbe ahụ, a ga-akwụsịrịrị ọrụ niile n'ime akpa akwa. Ka ọ dị ugbu a, saịtị ndị dị mkpa akwụsịla ọrụ ma mee mkpochapụ gburugburu ebe obibi, ndị metụtara ya na-eme nnwale nucleic acid maka nyocha.
Ọdụ ụgbọ mmiri Ningbo Zhoushan nwere ngwongwo ibu na-anọgide na-abụ nke mbụ n'ụwa maka afọ iri na abụọ n'usoro, ntinye akpa na-aga n'ihu na ọkwa nke atọ n'ụwa, na ọdụ ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ dị elu karịa ọdụ ụgbọ mmiri Shenzhen. Ikpe a ga-enwe mmetụta siri ike na ahịa mbupu akpa na-emebi emebi! Enwere ụgbọ mmiri na-ebufe nwere ike ọ ga-egbu oge ịbịarute. Biko leba anya na mbupu mmiri dị nso nso a.
Ebe ụgbọ mmiri na ụgbọ elu na-amachi oke, mbupu na-esi ike, na-ebuli ibu ibu.
Ya mere, biko kpọtụrụ ibu mbupu ọzọ mgbe ngwaahịa dị njikere iji zere ịtụ anya na ya.
Agbanyeghị, nke ahụ apụtaghị na mbupu ụgbọ mmiri ga-akwụsị. Nke a bụ ndụmọdụ ụfọdụ maka nkwakọ ngwaahịa na mbupu:
1.Boxes nha akara max enweghị ike karịa 70CM,
2.Ọ bụla igbe nnukwu arọ enweghị ike karịrị 22KG, gbakọọ dị ka 10KG ma ọ bụrụ na igbe nnukwu arọ n'okpuru 10KG. Ọ ga-akpatakwu ụgwọ ma ọ bụrụ na ihe karịrị 70CM, 22KG. Biko tinye uche na nkwakọ ngwaahịa katọn.
3.Biko jiri nhọrọ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, n'ihi na ọ ga-adịkwu mma na ngwa ngwa. Iji zere ohere nke efu.
Yabụ biko kpọtụrụ ibu mbupu mgbe ngwaahịa dị njikere. Ọ ga-abụ nke ziri ezi.
Anyị bụ Yiwan Apparel. Co., Ltd nke nwere ike inyere gị aka na ndị na-emepụta uwe gụnyere ejiji n'okporo ámá ụdị uwe nwoke, nkwakọ ngwaahịa ọkachamara & nhazi mbupu, ect. Ọrụ ụgbọ oloko anyị ga-enyere gị aka ime ka ihe dị mfe.
egbula oge. Anyị nọ ebe a na-eche gị:)
Oge nzipu: Ọgọst-10-2021